Hupenyu Hwangu – ebooks
You are here: Home > Novels > Current Article
By adminpub / August 23, 2016 / No Comments
‪#‎tag0777‬ 900 019
Amai vangu pavakashaya ndainge ndiri form 1 ,ndivo vaindi bhadharira mari yechikoro sezvo baba vaingoteedza mashabhini vachinwa doro .Shabhini ndiwo waive musha waBaba vangu uye doro ririsahwira wavo .Taitoita maricho pese paivharwa zvikiro kuti tiwane zvekupfeka nemabhuku ini naAmai vangu .Chokwadi nherera inoguta musi unofa amai vayo ichi ichokwadi hama .Ndainge ndirere mugota mangu kuseni .Ndipo pandakanzwa mhere kubva kubedroom kwavo baba vachimema
“Amai Tawanda wandisiya zvaita sei wati ndosara nani ” ,” ko mwana wati ndoitasei naye zvauriwe muriritiri wake ?”
Baba vakachema ,ndakamuka ndokumhanyako ndikasvika amai vakavhura maziso vakatarsa asi vaisa bwaira .Muviri wavo wainge waregedzeka uye rurimi rwuri panze kuratidza kuti rwainge rwazara mukanwa .
Ndakasvikovabata bendekete kuti ndinzwe kana vaizotaura neni uye kut ndizive zvaiiitika .Ndakanzwa muviri wavo uchitonhora. Hana yakarova uye ndakashaya kuti ndodii chandaka kwanisa kuita kusimuka , ndokubata maziso avo kwaakupfuudza ruoko rwangu nepamusoro kuti ndiavhare .Misodzi yakaerera nematama pandakaona amai vangu vachivhara maziso ndakaziva kuti havandioni zvachose .Vainge vandiguma zuro nyama nemweya zvichiri pamwechete.
Vavakidzani vakanzwa mhere mhere kubva pamba pedu paibongomora baba vangu .
Pasina chinguva ndakange ndoona vanhu vokoromoka kuuya kuzobata maoko .Pachokwadi hama misodzi yaibuda paye pandainzi “nematambudziko “,ndaibva ndanzwa moyo kurwadza pachokwadi .
Vakachengetwa amai vangu parufu hama zhinji dzakati dzaizondikomberana kundichengeta sezvo ndaive zai regondo ndega ndega .Baba vakaramba kuti ndiende navatete , vakati vaizondichengeta vega. Ko ndaizivei kuti kwaiva kutaura chete asi hapana chimuko ? .Pavakataura vanhu vakavanzwira tsitsi, vamwe vakati vaizotibatsira nepavaigona napo ,vamwewo ndovakati kana zvanetsa ndinovataurira kuti pane zvarema .
Pakapera zvimazuva vanhu vachitaura nezvekushayika kwaamai vangu asi nekupindana kwemazuva vakazenge vanyarara .
Baba vakambondibatisisa amai vachangoenda asi nemazuva mashoma ndakazoona vatanga havo kunwa semazuva ese. Vaiti pamwe vanoraradza pamwe ndipopavaidzoka kunze kwayedza.
Chikafu chakatanga kuita chishoma mumba sezvo baba vaisatenga mari yaipera kuhwahwa.
Nguva yekuti ndikwanise kana kutsvaga mari yechikafu ndaiyiwana pakupera kwevhiki pandainge ndisinga chaendi kuchikoro ndiri paweekend .Pamwe ndaishandira bhagidhi rechibage , pamwe mufushwa wenyevhe , pamwe wemunyemba pamwe ndaitotora mhodzi dzederere rechipodzi ,ndodzi kanga pamoto kana dzaibva ndotswa . Paye padzainge dzatswika ndaidzitora ndodziisa mumvura inopisa ndosvina mafuta anenge anyangarika pamusoro pemvura . Zviya zvinenge zvasara ndaizozviomesa ndozvibika kuita usavi .
Dzimwe nguvai ndairara nenzara pasina chandainge ndadya kana ,sezvo painge pasina chekubata.
Nyama ndaitoiwonera kumakwato chaiko .Kuri kuchikoro ndaitoenda netsoka chaidzo hapana kwandaiwana kana anondipa shangu dzekupfeka .Mabhuku nezvimwe ndaitobata mumaoko nekuti pekuisa painge pasipo ,ndaito ngoedza nepandinokwanisa kuti ndisadzingwe chikoro .Dzimwe dzenguva ndaito buda nepahwindo kana vauya mabharani vepachikoro pedu kuzotidzinga isu vainge vasina kubhadhara.Ndaiwanzofarira kugara mukona hangu kumashure shure kuitira vaye vanopesuka pesuka nguva dzekudzidza . Ndakadzidza kusvika pakupedza fomu 4 ndichingoita saizvozvo zvekutiza tiza kubhadhara mari .
Ndaitoti pamwe kana ndaiwana ndobhadhara inenge iripo iyoyo .
Pachikoro chaipo ndaiziva hangu zvekuti hawaifungira kana ukaona bhuku rangu kuti ndini .Ndaito verenga nechibani chaicho pasina kana kenduru .Zvisinei ndakazopedza hangu chikoro zvakaoma kudaro , ndakanyora nemari yandainge ndarikichira zvakasimba kuti ndiiwane vakandi bvumidza hangu kunyora .Ndapedza kunyora hapana kwandaizoenda sezvo pasina wandaiziva chaitovapo kutsvaga vanoda kufudzirwa mombe kuti ndigowana cheuviri .Ndakavawana baba vakanditi ndivafudzire kana rapera gore vaizondipa kamhuru kanguwo .Baba vangu panguva iyi vainge votorara kudoro vouya kumba apo neapo .Dzimwe nguva kamwe chete pamwedzi , dzimwe kaviri .Vainge voteera ndari nedzindufu ndokwavainge voswera .
Hapana chandaikwanisa kutaura kana kuita semwana .Huku dzainge dzasiiwa na amai vaitoti kava vadzoka kudoro vouraya kanambiri vogocha havo .Ndaingotarisa hangu ndaigodii mwana waChipo .Hama dzese dziya dzakati dzaizondi chengeta Handina kana wandakazoona akashanya kana kamwe hako kuzondiona .
Huku dzaipera zvishoma nezvishoma , zvese izvi zvaive mumaziso angu .Ndaiti kana ndichifudza mombe dzimwe dzenguva ndaimbofunga hupenyu hwairaramwa nedzimwe hama dzangu , vanasekuru vangu hanzvadzi dzamai vaive nezvitoro muharare vanzi Johane nemubhuradha wavo Jairos .
Vamwe ndivaive Mudzidzisi paChivhu pachikoro chinonzi Liebenberg High School vanonzi Jetro . Ndivo vaive vakuru kuchiteera mapatya mai ndovaiva gotwe .
Hupenyu hwainge hworarama vanasekuru vangu ndehuya hwemari .Waiti ukasvika pamba painge paine uswa huya hunodiridzirwa huya , kana dziri shangu waitobvisira uchikamufambo chaiko .Painzi paive nemunhu aibhadharwa kucheka huswa ihwohwo nekudiridza .Apo ini ndaifa nezvishambwe nembuwe ndiri kumakura . Nyatera chaidzo ndainge dzatodzisiirwa na sahwira wangu Fainos .Yainge zvino yapera chitsitsinho chese nekufamba zuva nezuva ndichirisa mombe .
Chirimo ndaisarira mombe ndozonotsvaga hangu zuva rodoka , ini ndaiswera ndichidiridza bindu rangu kuti ndigowana usavi .Ndaitofara kana misungo yangu yabata chikwari kana mhuka ingave ipi , ndaiziva kuti ndinemazuva ndichimbosuka mukanwa . Kuti ndiende kunana sekuru hazvaiita nekuti ndaiti ndikafunga zvavainzi vakabata amai vachiri vapenyu hana yaibva yarova .
.Sekuru Jetro vainge vandisiira nhamba dzavo pachipepa vakati ndigovafonera kana
ndafunga kuenda kunovaona .Asi ini shuro zvayo ndaiiwanepi foni hangu , ndaitoshuvira kuti dai ndawana anombondipawo kana kobiri ndiwane yangu yandaizotiwo yangu .Ndaitoshaya kuti ndobata chiii chaicho kuti zvangu zvifambe mukaka ndaito uwana paye pairara mombe kwangu kudanga .Maricho chaiwo ndaitoshaya mukana wekumaita ndakazoronga zano , rekuti ndiite zvemadzoro nevamwe.
Ndakasvika pakufunga zano rekuti nditsvagire vanhu vanoda humi ,vondipawo madhora matatu pabakwa rimwe chete .
Izvi ndakazviita kwemwedzi mitatu yese ndikakwanisa kuisa mari inoita madhora zana chete mumba , ndakabva ndanobhadhara hangu kuchikoro kwavakupihwa maresults angu .Ndainge ndakapasa hama apo gore rainge ropera , zvino ndotarisira kuwana chimhuru change chiya .Uyu wainge wave mwedzi wechigumi.
Kubva zvandabva kuchikoro handina kuzobvira ndabata mari inodarika madhora mashanu muruoko rwangu .Ndaingobatawo madhora kana mana ,pamwedzi wese .Ndokunge ndatotumwa kuchigayo nevemuraini medu vaviri kana vatatu. Chikwama changu chaito panga mari pachokwadi chaigara chiine dhora rimwe chete , kuitira kuti nerimwe zuva ndazosangana nevanoenda dhorobha ndovabatisa vondiigira munyu.Zvaisava nyore kuti ndipinde mudhorobha nekuti jana nekurikicha zvandaita zuva nezuva.Vamuroyiwa vakandipa mombe kuti ndivafudzire vakati zonditi ndivake danga ndopota ndichiisa mauswa mudanga ,kuitira pandairadza mombe mudanga mangu ndigowana mupfudze wakati wandei ndichifudza mombe dzavaMuroyiwa .
Pakazoti waamwedzi wechigumi nerimwe ,kwasara masvondo maviri kuti mwedzi uchipera ndipo pavakashaika.Hama dzavo dzakauya dzika vachengeta kwavaku goverana zvinhu zvese . Murombo haarovi chinenguwo hama dzadiwa.Vakapanana zvese zvainge zviri pamusha apa ,kusanganisira zvipfuyo.Mombe iye yandainge ndavimbiswa iye vakaramba nayo.’
Hanzi mufi haana kunge atiudza saka hapana chatinoziva ‘.
Ndakaenda kwasabhuku vaMoyo kuti tinzwe kunowira tsvimbo nedohwe .Asi ndaive muduku , nyaya iyi yaitoda baba vangu apo vaingoswero chingura nenyika kuteedza hwahwa .Ndakademba kuti dai amai vangu vari vapenyu handainzwaro .Vakati dai Paine pamakanyorerana pasi tashandisa ipapo.Manje hama dzainge dzamaona mapepa iwayo kwaaku marasa,kuitira kuti vagondinyima mhuru yangu. Ndakarwadziwa.
Ndakamuka rimwe zuva mushure mekunge ndanyimwa Mombe yangu .Ndakananga kwasahwira wangu Fainos ndichida kunomuudza pfungwa dzandainge ndiinadzo . Ndainge ndafunga kuenda kuguta kunoona sekuru Jetro muChivhu mavaigara .Kamari ka ndainge ndaanako kaye kakasara pandaka bhadhara chikoro nekekuita maricho ndiko kandaizofambisa .
Ndainge ndisisina kana chekugarira pamusha ,mombe yangu vakaitora havo vagoni .Pachokwadi mwari ainge asina tsitsi neni ,ndashanda gore rotopera iye otora wacho ainge andipa tariro .
“Fainos shamwari ,ndafunga kuenda kuchirungu kwaanasekuru ndimbonoona kuti zvingasangane here .” ndakadaro .
“Manje wafunga kuenda zvariinhi hako ? ,ini wati ndosara nani kuno kumusha kuno “.
” Aaah shamwari ndiwe uchadaro here ndopota ndichizokuona kuno ka ” ndakamudavira .
Ahana mazhinji aakataura nezvekuenda kwangu takazotaura zvedu dzimwe nyaya . Kusanganisira yekunyimwa mombe kwandainge ndaitwa akaratidza kubatikana pachokwadi.
Ndakamuuudza kutindaizoenda mushure memazuva matatu ,zvino iye aizondiperekedza kunokwira Dutavanhu mambakwedza ,sezvo ndaisaziva kwandaienda ,zvaitoda kuti ndifambe masikati.
Approved By: adminpub
Last Modified: August 23, 2016 @ 2:35 pm
Tagged With: Hupenyu hwangu
Most Wanted: Lost Bag
Other articles approved by adminpub »
© 2018 ebooks. Read and Enjoy